ချစ်သူနဲ့ အမြဲစကားများရန်ဖြစ်နေပေမဲ့ အချစ်မပြယ်စေဖို့ - Chelmo News Portal
Home›Love›ချစ်သူနဲ့ အမြဲစကားများရန်ဖြစ်နေပေမဲ့ အချစ်မပြယ်စေဖို့
“ထစ်ခနဲရှိ တို့နှစ်ယောက် ရန်တွေဖြစ်…. အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာပြီး ရန်တွေဖြစ်…ချိန်းတွေ့တိုင်းလည်း ရန်တွေဖြစ်..
ဒီမှာ ဖုန်းလေးမအားလိုက်နဲ့ ရန်တွေဖြစ်..အင်တာနက်ပေါ်မှာ chat နေမိခဲ့ရင် ပျက်မှာပဲဆိုပီး ရန်တွေဖြစ်…မိန်းကလေးအပေါင်းသင်းနဲ့ နှုတ်ဆက်မိလိုက်လို့ ရုတ်တရက်ကြီးထရန်တွေဖြစ် ” စိုင်းစိုင်း သီချင်းဆိုပြတာ
ဒီသီချင်းလေးထဲကလို အမြဲစိတ်ကောက် စကားများ ရန်ဖြစ်နေရတဲ့ အတွဲလေးတွေရှိမှာပါ။ သမီးရည်းစားတွဲတွေ ရန်မကြာ ခဏ ဖြစ်တဲ့ အတွဲလေးတွေက relationship ပိုပြီးခိုင်မြဲ စေတယ်လိုပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ဂရုတစ်စိုက်မရှိတဲ့အခါ ပြသနာသေးသေး လေးတွေကနေ တစ်စတစ်စ ကြီးထွားလာတဲ့ အခါ Relationship ကိုပျက်စီးဖို့ လမ်းစတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ရန်ဖြစ်တဲ့ အခါမှာ သတိလေးနဲ့မလုပ်သင့်တာလေးတွေမလုပ်မိအောင် ပြောပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
၀၁. လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။
ရန်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းက တစ်စတစ်စ ကြီးလာပြီ၊ ဒါဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းရာပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ တစ်ခြားစိတ်ပေါက်စရာ အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ conflict သေးသေးလေးတွေကိုပါ ပြန်အစဖော်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလို problems တွေအပုံလိုက်လုပ်လိုက်တာက အခြေအနေကိုပိုရှုပ်ထွေးစေပြီး တစ်ကယ်ရှင်းလင်းရမဲ့ပြဿနာ ကို မဖြေရှင်းနိုင်ပဲ ဖြစ်သွားပါမယ်။ Relationship struggles တွေကို အရေးကြီးတာကနေ သေချာဦးစားပေးဖြေရှင်းတာက ပူပန်သောကများရတာ၊ စိတ်ပျက်ခံပြင်းရတာမျိုး တွေကိုလျော့စေမှာပါ။
အငြင်းအခုံဖြစ်၊ စကားများတယ် ဆိုတာ ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ ဆိုတာမေ့နေကြပါတယ်။ အဲဒီအစား ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကပဲမှန်တယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူကပဲမှန်တယ် စသဖြင့် တစ်ဖက်စောင်းနင်းပြုလုပ်တာမျိုးက ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်မသွားပါဘူး။ ဒီလိုအနိုင်ယူလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဆီက ကောင်းမွန်တဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမျိုးရဖို့ ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်သူကို အနိုင်ယူလိုက်တာမျိူးထက် သူ့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း နားလည်ပေးပြီး problem ကိုပဲ ဖြေရှင်းပီး အနိုင်ယူတာမျိူးလုပ်ပါ။
ငြင်းခုံ၊ စကားများနေချိန်မှာ သူ့ကို ချစ်တယ်၊ ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ သူသိနေပါစေ။ သူ့ရဲ့ အမြင်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကို လဲ ထုတ်ဖော်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါစေ။ သူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ကဆန့်ကျင်နေတာနဲ့ပဲ သူမှားတယ်ဆိုတာမျိူးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ချစ်သူရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် နဲ့ ဂရုမစိုက်ဘဲ သူ့ရဲ့အမြင်ကို ဘုကြည့်ကြည့်ပြီး သံကုန်ဟစ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ထေ့ငေါ့တာနဲ့ အထက်စီးဆန်တာမျိုးက loving and healthy relationship မဖြစ်စေပါဘူး။
နားထောင်တာက communication ရဲ့အခရာပါ။ နားထောင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ တစ်ချို့ပြဿနာတွေဆို တစ်ဝက်လောက်ဖြေရှင်းပီးသားဖြစ်သွားပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ partner ကလည်း ကိုယ်ကနားထောင်ပေးနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘာပြောမလဲ ဆိုတာ သိချင်လာပါမယ်။ ဒီအခါမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက ကိုယ့်ဘက်က အမြင်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပြည့်စုံစွာနဲ့ လေးလေးစားစား ဖော်ပြနိုင်မှာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်အော်နေတာမျိုးက နားထဲရောက်မှာလဲ မဟုတ်သလို အချင်းချင်းပစ်ပယ်ခံရသလို ဖြစ်သွားပါမယ်။ တစ်ယောက်ကစ အလျှော့ပေးပြီဆိုရင်တော့ အခြားတစ်ယောက်ဆီကလည်း တူညီတဲ့ respect မျိုးပြန်ရသင့်ပါပြီ။
“ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ပိုနာကျင်စေနိုင်မလဲ ” ဆိုပြီး အပြိုင်အနိုင်ယူချင်ကြတာက relationship ပျက်စီးဖို့ အတွက် ဒီထက်ကောင်းတာ ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။” မျှတစွာ ငြင်းခုံမယ် ” ဆိုတာက အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့နည်းလေးတွေအပြင် လေးစားမှု နဲ့ တန်ဖိုးထားမှု တို့ပါ ထပ်ပေါင်းပြီး ငြင်းခုံတာမျိူးပါ။ မရည်ရွယ်ပါပဲနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု (self-esteem) ကို ထိခိုက်စေတာ၊ ခြိမ်းခြောက်ကြိမ်းဝါးတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေပေးတာက ကိုယ်နဲ့သူ့ရဲ့ relationship ကိုပြီးပြတ်စေဖို့ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ။ Conflict ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို control မလုပ်နိုင်ရင် anger management ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါပြုမှုတွေကနေ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကာကွယ်ပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ခံပြင်းမှု၊ စိတ်ပျက်မှုတွေကိုပါလျော့ကျစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပြောပြပြီးတဲ့ အခါ ကိုယ်နဲ့ သူ့ရဲ့ Relationship ကိုမြဲမြံချင်တာ ကိုသူသိအောင် ဂရုတစိုက်ပြုမူလိုက်ပါ။
ကဲ…… SAI သီချင်းလေးနဲ့ပဲ နိဂျုံးခုပ်လိုက်မယ်။ “နောက်တစ်ယောက်လည်း မချစ်နိုင်ဘူး…မင်းတစ်ယောက်ထဲချစ်ချင်လို့ပါ..ငြိမ်းချမ်းရေးလေး ဆွေးနွေးခွင့်ပြု ” ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောက်၊ ရန်ဖြစ်ဖော် ချစ်သူလေးကို mention ခေါ်ပြီး နောက်နောင် ရန်ဖြစ်စိတ်ကောက်ရင် ရှောင်ကြမယ့် နည်းလေးတွေကို အသိပေးလိုက်နော်။
Permission to Dance; Billboard Top 1 ရရှိမှုအပေါ် Army တွေကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့တဲ့ Ed Sheeran